5 Koorsooyinka Chemistry -ga ee Sare ee loogu talagalay Darajada Kulliyadda 2022
5 Koorsooyinka Chemistry-ka ee ugu sareeya ee Online-ka ee Deynta Kuliyada
Maqaalkan, waxaad ka heli doontaa koorsooyin kimistari online ah oo loogu talagalay buundooyinka kulliyadaha kuwaas oo loo wareejin karo kulliyadaha iyo jaamacadaha. Anaga Study Abroad Nations liiska koorsooyinkaan ku sameeyay qoraalkan, marka dib u fadhiiso oo si wanaagsan u akhri.
Chemistry-ga ayaa ah laanta cilmiga ee daraasad ku sameeya maadada iyo la falgalkeeda maadada iyo tamarta kale. Laankan sayniska wuxuu muhiim u yahay sida fiisigiska iyo bayoolajiga oo waxaa si fiican loogu isticmaalaa sharraxaadda ereyo bayooloji ah.
Chemistry sidoo kale waxtar ayey u leedahay fulinta qaar ka mid ah hababka bayoolojiga, sidaa darteed qaab ahaan, kiimikada iyo bayoolajiga ayaa xiriir dhow leh.
In kasta oo ay isku dhow yihiin haddana wali waxay u taagan yihiin laba qaybood oo kala duwan oo waxbarasho ah waxaana lagu bixiyaa habkaas jaamacad kasta iyo kulliyad kasta.
Marka, haddii aad ku jirto hal dariiqo ama mid kale oo baranaya cilmiga kiimikada markaa boostadani waa mid adiga kuu gaar ah, haddii aadan ahaynna, waad hubin kartaa talooyinka ku taxan dhammaadka qodobkan si aad u aragto wax xiisaha kuu leh.
Chemistry, sida laanta kale ee cilmiga sayniska, way ku adagtahay qaar runtiina way u fududdahay kuwa kale. Si kastaba ha noqotee, haddii aad isku aragto inaad u qaadanayso koorso jaamacadeed ama koleej markaa ma lihid xulasho aan ka ahayn inaad u gudubto.
Wax barashadu waxay kaa caawin doontaa inaad kor u qaaddo waana tan waxa boostadani ku wacdiyeyso, laakiin markan ayaa ka sii habboon. Xaqiiqdii waad qaadan kartaa koorsooyinka kiimikada khadka tooska ah ee kulliyadda. Eeg, ayaa laguu sheegay inay kuu roon tahay.
Waa inaad horeyba u ogaatay sida ay wax u barashada khadka tooska ah ee internetka u dhaaftay iyo sidoo kale faa'iidooyinka badan ee qaabka gaarka ah ee waxbarashadu u soo bandhigo. Barashada internetka waa kacaanka kaliya ee dhacay tan iyo markii la alifay waxbarashada.
Meel kasta oo aad adduunka ka mid tahay waad joogi kartaa oo koorso waad qaadan kartaa, xirfad baran kartaa, ama shahaado qaadan kartaa adigoon sariirtaada iyo fadhigaaga ka tegin. Ku habboonaanta la socota waxay aad uga sarreysaa tan fasalka sidoo kale waxaa jira faa'iido dabacsanaanta kuwa kale.
Hal-abuurnimadan cajiibka ah waxaad ku baran kartaa kiimikada kuleejka khadka tooska ah waxaadna ugu wareejin kartaa dhibcaha kulliyad kasta oo aad rabto inaad dhigato. Waxaad u baahan tahay oo keliya inaad ku dalbato wareejinta deynta adoo adeegsanaya foom codsi ah oo ay bixiso hay'adda martida loo yahay.
Haa, waxaad u baahan tahay inaad iska bixiso koorsooyinka kiimikada ee internetka ee amaahda kulliyadda taas oo inta badan laga qaado koorso deyn ah. Koorsooyinku waxay daboolayaan kiimikada guud iyo kuwa dabiiciga ah iyo inay kuu sahlanaato adiga laba hoosaad oo kala duwan ayaa hoosta looga sameeyaa mid kasta oo ka mid ah laamaha kiimikada.
Waa maxay Dhibcaha Kulliyadda?
Ma ka qaadan kartaa kiimikada kuleejka khadka tooska ah?
Koorso bilaash ah oo bilaash ah ma bixin kartaa dhibco kulleejo?
Koorsooyinka Kiimikada ee Online-ka ee Deynta Kuleejka
Koorsooyinka Kiimikada Guud ee Khadka Tooska ah ee Dhibcaha Kuleejka
Kimistariga Guud 1
Kimistariga Guud 1 Lab
Kimistariga Guud 2
Koorsooyinka Kimistariga Organic ee Khadka Tooska ah ee Daynta Kuliyadda
Kimistariga Noolaha 1
Kimistariga Noolaha 2
Dhibcaha kulleejadu waxay cabirtaa tirada saacadaha la codsaday ee loo aqoonsan yahay dhammaystirka koorso gaar ah. Waxaa sidoo kale loo adeegsadaa cabbiraadda caadiga ah ee aqoonta ardayga, hal dhibic kulleejku wuxuu metelaa hal saac oo lagu qaatay fasalka dhexdiisa iyo laba saacadood oo lagu qaatay shaqaguriga toddobaad kasta.
Haa, waad awoodaa. Waxaa jira noocyo ka mid ah barnaamijyada barashada internetka ee iskaashiga la leh kulliyadaha qaarkood oo bixiya koorsooyinka kiimikada khadka tooska ah.
Tusaalooyinka barnaamijyadan waa Coursera, edX, FutureLearn, Alison, iwm. Waxaad ka heli kartaa liis faahfaahsan oo ah baraha internetka ee ugu sareeya halkan.
Runtii waxaa jira koorsooyin khadka tooska ah oo bilaash ah oo bixiya amaahda kulliyadda laakiin waxaad u baahan tahay inaad iska diiwaangeliso jaamacad ama barnaamij kulleejo. Koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah waxaa loo yaqaan MOOCs (koorsooyin furan oo furan oo furan) oo ay bixiyaan hay'adaha ugu sarreeya.
Marka, waxaa jira koorsooyin khadka tooska ah oo bilaash ah oo bixiya dhibcaha kulliyadda laakiin waa inaad ka diiwaangashan tahay hay'ad sare macnaheedu waa inaad marto nidaamka oggolaanshaha caadiga ah iyo bixinta waxbarashada.
Waxyaalahan oo dhan markii lagaa nadiifiyey waad sii socon kartaa si aad u aragto 10 koorsooyinka kiimikada sare ee internetka ee deynta kulliyadda
Labada laamood ee ugu waaweyn ee kiimikada ayaa kala ah General Chemistry iyo Organic Chemistry, mid walibana wuxuu ka kooban yahay maadooyin kale oo la xiriira kimistariga. Xogtaan, waxaan ku kala saari karnaa koorsooyinka kiimikada khadka tooska ah ee loogu talagalay buundada kuleejka si fudud loogu aqoonsado.
Kuwa soo socdaa waa koorsooyinka kiimikada guud ee khadka tooska ah ee dhibcaha kulleejada;
Kimistariga Guud 1 waa koorso hordhac u ah kimistariga oo ardaydu ku bartaan aasaaska kimistariga.
Ardayda waxaa loo soo bandhigayaa atamka, aragtiyaha qiyaasta, walxaha xilliyeed, falcelinta kiimikada, sheyga, iyo sifooyinka adag, dareeraha, iyo gaaska.
Koorsadan dhexdeeda, ardaydu waxay awood u yeelan karaan inay dhisaan aasaas adag oo loogu talagalay daraasad dheeri ah oo ku saabsan kiimikada. Kani waa koorsadii ugu horeysay ee arday kasta oo saynis ah waa inuu wax ka barto cilmiga kiimikada si uu u siiyo faham hore oo uu ula qabsado shuruudaha ku habboon.
The Kimistariga Guud 1 Lab Dabcan waa nooca sheybaarka ee General Chemistry 1 sidoo kale waa mid ka mid ah koorsooyinka kiimikada internetka ee loogu talagalay dhibcaha kulleejada. Guud ahaan Chemistry 1 wax kasta oo aad ku baran doonto waa aragti iyo inaad barato ficil ahaan shaybaarka guud ee Chemistry 1 ayaa loo baahan yahay.
Tan sidoo kale waxaa lagu sameeyaa jaamacadaha iyo koleejyada sidoo kale waad sameyn doontaa sidoo kale, laakiin markan gurigaaga. Iyada oo loo marayo casharrada fiidiyowga, waxaad ku baran doontaa hage talaabo talaabo ah oo ku saabsan sida loo sameeyo shaybaarka gurigaaga. Waxaa sidoo kale jira xirmooyin aad u baahan tahay inaad soo iibsato iyo / ama aad ku haysato gacantaada.
Sida biyaha la nadiifiyey, shukumaan xaashi ah, maqas, dinaar, biyaha qasabada, biyaha tuubada diirran, barafka, saacadaha saacadaha saacadaha / saacadda, madbacada, kamarada (telefoonka kamarada), iyo kalkuleytar
The Kimistariga Guud 2 koorsadu waa mid ka mid ah koorsooyinka kiimikada internetka ee loogu talagalay dhibcaha kulliyadda ee qaybta kiimikada guud waxaana bixiya Barnaamijka Sayniska Isku-dhafan. Koorsadu waxay ardayda u sii qaadaysaa kimistariga guud, iyadoo horumarinaysa fikradaha lagu soo bandhigay kimistariga guud 1.
Fikradaha soosocda ee ladarsay waxaa kamid ah heerarka falcelinta iyo isu dheelitirka, elektroolka, redox, sharciga thermodynamics, enthalpy iyo entropy, Gibbs tamarta bilaashka ah, kiimikada nukliyeerka, heerkulbeegga, isu dheelitirka, iyo kuwa kale.
Waxyaabaha soo socdaa waa koorsooyinka kiimikada kiimikada ee khadka tooska ah ee loogu talagalay deynta kulliyadda ee ay tahay inaad dalbato;
Kimistariga Noolaha 1 waa mid ka mid ah koorsooyinka kiimikada internetka ee loogu talagalay deynta kuleejka ee qaybta kiimikada dabiiciga ah waxaana bixiya Barnaamijka Sayniska Isku-dhafan.
Tani waa daraasadda hordhaca ah ee kimistariga dabiiciga ah waxayna u oggolaaneysaa ardayda inay helaan faham iyo qadarin ku saabsan iskudhafyada fudud ee dabiiciga ah. Koorsadani waa tan lagu dhisi doono aqoontaada aasaasiga ah ee kiimikada dabiiciga ah.
Koorsada, Kimistariga Organic 1, wuxuu ardayda u soo bandhigayaa dhowr mowduuc oo hordhac ah oo ay ku jiraan qeybaha kala duwan ee iskudhafka kaarboonka udugga, qaabdhismeedyadooda, iyo magacyadooda.
Kuwani iyo kuwa kale oo badan ayaa ah mawduucyada la bari doono ardayda marxaladan hordhaca ah aqoontuna waxay ku hagi doontaa iyaga oo qoto dheer cilmiga kimistariga.
Koorsada, Kimistariga Noolaha 2, waa mid kale oo ka mid ah koorsooyinka kiimikada internetka ee loogu talagalay deynta kuleejka oo bixisa qoto dheer, aqoon ballaaran oo ku saabsan kiimikada dabiiciga ah. Maadaama aad aasaaska aqoontaada u dhigtay adoo adeegsanaya Chemistry-ga Organic 1, kani waa horumar.
Koorsadani waxay ardayda baraysaa waxyaabaha ku saabsan kooxaha waxqabadka leh iyo muhiimadda ay leeyihiin maaddooyinka maaddooyinka fudud ee jirka ku jira ee ku dhex jira meydadka sida aalkolada, fenolladaha, ethers, aldehydes, ketones, amides, esters, amines, iyo carboxylic acid.
Kuwani waa koorsooyinka kiimikada sare ee internetka ee loogu talagalay dhibcaha kulleejka ee kiimikada guud iyo qaybaha kiimikada dabiiciga ah. Xaqiiqdii, tani waa waxa kaliya ee jira barashada kiimikada mowduuc walbana waa inuu ku dhacaa mid ka mid ah cinwaannadan hoose.
Xidhiidhada saxda ah ayaa laguu siiyay si aad uqorto, waana inaad iska diiwaangelisay jaamacad ama barnaamij kulleejo kahor intaadan dalban mid kamid ah koorsooyinka kiimikada internetka. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad la xiriirto hay'addaada martigelinta kahor intaadan dalban mid ka mid ah koorsooyinka sidoo kale.
Koorsooyinka Online-ka ee Yale Bilaash ah
koorsooyinka kiimikada internetka ee loogu talagalay deynta kuleejka
Previous Post:5 Kulliyadaha Naqshadeynta Ciyaaraha Sare iyo Jaamacadaha loogu talagalay Naqshadeynta Ciyaaraha Weyn
Post Next:Shuruudaha Jaamacadda Alberta | Khidmadaha, Deeqaha waxbarasho, Barnaamijyada, Qiimeynta
Edudorm wuxuu leeyahay,
May 4, 2021 at 11: am 24
Chemistry waa koorsooyinka ugu adag kuliyada